အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက Non-CDM ကျောင်းဆရာ/ဆရာ မများအား ထောက်ပံ့ကြေး သုံး သောင်းကျပ် ပေးပြီးစည်းရုံး - Myanmar Pressphoto Agency
MPA October 5, 2021 1 min read
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာ နက ၎င်းတို့လက်အောက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ(Non-CDM) အခြေခံပညာသင်ကြားရေးကျောင်းဆရာ/ဆရာမများအား တဦးလျှင်ငွေကျပ် ၃ သောင်းနှုန်းထောက်ပံ့ပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
” ထောက်ပံ့ကြေးပေးမယ်လို့ကြားနေတာ သုံး ရက်လောက်ရှိပြီ။ ခုက တရားဝင်စာမနေ့က ထွက်လာတာ။ ဘယ်နေ့ပေးမလဲတော့မသိသေးဘူး။အရင်ကတော့ ဒါမျိုးမရဖူးဘူး ” ဟု လုပ်သက် ၇ နှစ်ရှိ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးက MPAသို့ပြော သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း သင်ကြားရေးဆရာ/ဆရာမ ၂၉၀၇၃၇ ဦးအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ ကျပ်သန်း ပေါင်း ၈၇၂၂ အား အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် စစ်ကောင်စီက စာသင်ကျောင်းများကိုလည်း အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ထိ ၁ လအကြာဆက်ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကောင်စီအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏လက်အောက်ရှိ စစ်သားနှင့်ရဲများအ​ပါအဝင် ဝန်ထမ်းအသီးသီး အား CDM မပြုလုပ်ရေး နည်းမျိုးစုံဖြင့် စည်းရုံးနေကြောင်း သိရသည်။
#အခြေခံပညာ #ဆရာ/ဆရာမများ #ထောက်ပံ့#MPA
Terrorist SAC Entices Non-CDM School Teachers Providing 30,000 Kyats of Subsidies
The Ministry of Education under the Terrorist SAC announced that they will give each of active non-CDM basic education school teachers 30,000 Kyats of provision.
“I’ve heard about providing subsidies since about three days ago. Now, the official letter was issued yesterday. I don’t know when they will give. I’ve never received one before”, saidafemale school teacher who has7years of experience to MPA.
For 290,737 school teachers across Myanmar, 8722 millions of Kyats will be reportedly used.
In addition, the SAC will continue to keep the schools closed until October 24.
The SAC is persuading the staffers including soldiers and police under their control in all sorts of ways to not join CDM.
#BasicEducation #Teachers #Provide #MPA
Tags: Education MPA Myanmar News NonCDM Teacher
Previous: ပထမနှစ်တန်းများနှင့် အခြားအတန်းများ ဖွင့်လှစ်ရန် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ပြုပြင်မှုများပြုလုပ်နေ
Next: နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် စာသင်ကျောင်းများ ပြန်ဖွင့်လှစ်ရန် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစီစဉ်နေ